Mometasone furoate (83919-23-7) hplc≥98% ကိုဝယ်ပါ။ | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Mometasone furoate (83919-23-7)
rating: SKU: 83919-23-7. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ခြေရာခံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Mometasone furoate (83919-23-7) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူဖြစ်သည်။
Mometasone furoate (83919-23-7) ဗီဒီယို
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Mometasone furoate
CAS အမှတ်: 83919-23-7
Mometasone furoate (83919-23-7): Description:
Mometasone Furoate သည် furoate ဆားပုံစံဖြစ်ပြီး mometasone ၏ဒြပ်ဝတ္ထုဖြစ်သောဂလူးကော့တိုကိုစတီရွိုက် receptor agonist၊ ရောင်ရမ်းမှု၊ ဆန့်ကျင်မှုနှင့် vasoconstrictive ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
Mometasone furoate သည် cytoplasmic glucocorticoid receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်စေပြီးနောက်ပိုင်းတွင် glucocorticoid receptor-mediated gene expression ကို activate လုပ်သည်။ ဤသည်အချို့သောရောင်ရမ်းဖျန်ဖြေ၏ပေါင်းစပ်တားစီးနေစဉ်အချို့သောရောင်ရမ်း anti- ပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်မှု။
အထူးသ, mometasone furoate အားဖြင့် phospholipase A2 အားဖြင့် phospholipid အမြှေးပါးကနေရောင်ရမ်းရှေ့ပြေး arachidonic အက်ဆစ်၏လွှတ်ပေးရေးကိုထိန်းချုပ်, phospholipase A2 inhibitory ပရိုတိန်းသွေးဆောင်ပုံရသည်။
1: Zalmanovici Trestioreanu A၊ စူးရှသော sinusitis အတွက် Yaphe J. Intranasal steroids ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst Rev. 2013 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ 2; 12: CD005149 ။ Doi: 10.1002 / 14651858.CD005149.pub4 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 24293353 ။
2: အဲလစ် AK၊ North ML၊ Walker T၊ Steacy LM ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့မှုယူနစ် - မတည့်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအတွက်ထိခိုက်လွယ်သော၊ တိကျသောနှင့်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သောနည်းစနစ်။ Ann Allergy ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ Immunol ။ 2013 နိုဝင်ဘာ; 111 (5): 323-8 ။ Doi: 10.1016 / j.anai.2013.07.019 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 24125135 ။
၃: Lee JT, Han JK နာတာရှည် rhinosinusitis များအတွက် Sinus implants: နည်းပညာအကဲဖြတ်။ ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက် Drug Deliv ။3ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ; 2013 (10): 12-1735 ။ Doi: 48 / 10.1517 ။ Epub 17425247.2013.839654 ခုနှစ်အောက်တိုဘာ 2013 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID:3။
နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါအတွက်တစ် ဦး တည်းရှူရှိုက်မိသော corticosteroids များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Nannini LJ၊ Poole P၊ Milan SJ, Kesterton အေ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst Rev.4ခုနှစ်သြဂုတ်လ 2; 2013: CD30 ။ Doi: 8 / 006826.CD10.1002.pub14651858 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ PubMed PMID: 006826 ။
17α-Hydroxyprogesterone အမှုန့် (68-96-2)